Mamaritra ny habeantsika ny jenetika
Mamaritra ny lokon’ny volontsika, ny masontsika, ny halavantsika, ny habeantsika (lava mahia na fohy matavy), … ny jenetika. Noho izany, afindrantsika amin’ny taranantsika ny gènes antsika. Nefa, satria manana gènes samihafa avy isika, sarotra ny hanao salade de fruit de gène. Mety hoe mahazo ny codes génétiques an’ny ray aman-drenintsika isika nefa tsy hita amin’ny vatantsika izany. Nefa mety hipoitra amin’ny taranantsika indray. Izay ohatra ny antony mety ahitana olona mitovy amin’ny sinoa na frantsay any anatin’ny fianakaviana malagasy na dia manana endrika malagasy aza ny rainy sy ny reniny. Izay no mahatonga ny zaza roa izay nateraka olon-droa mety hanana lokom-bolo samihafa. Misy aza kambana izay tsy mitovy lokom-bolon-koditra : ny iray mangamanga, ny iray fotsifotsy. Noho izany, tsy mahagaga ny mahita olona mahia ara-natoraly izay teraka tanatin’ny fianakaviana olona matavy. Mahatalanjona ny natiora.
Nefa, tsy azo hadinoina fa tsy miova haingana ny gènes antsika. Nila taona aman-tapitrisa mba nahavitana ny fivoaran’ny olombelona. Noho izany, raha matavy ny ray aman-dreninao, nefa ny rainao sy ny renibeanao na ny teo alohan’izay (avy tamin’ny rainao sy ny reninao) tsy matavy akory, mety tsy manana « gènes de gros » ianao. Fa mety hoe vokatry ny régimes nataon’ny ray aman-dreninao ny nampatavy azy.
Hadihadio raha tena manana « gènes de gros » ianao
Mba hahalalanao fa misy « gènes de gros » ianao, makà fotoana mba hieritreretana sy hamaliana ireto fanontaniana manaraka ireto :
Teraka tanatin'ny fianakaviana feno olona matavy ve ianao ?
Matavy ve ny ray aman-dreninao ?
Matavy ve ny rainao sy ny renibeanao ?
Matavy ve ny ray sy ny renin'ny rainao sy ny renibeanao ?
Matavy ve ny fiavianao ? Oh : olona tany aloha be tany ...
Efa natavy foana ve ianao hatramin'ny fahazazanao ?
Tadidinao ve fa mba nahia ianao tamin'ny fahazazanao ?
Efa mba nihena tao ambanin'ny lanjanao amin'izao ve ianao hatrizay ?
Rehefa mihena ianao, mihodikondina manodidina ny lajanao amin'izao ve ianao hatrizay dia tsy mety nihena tao ambanin'izay mihitsy ? Oh : eo amin'ny manodidina ny 70kg : 69kg, 71kg, 68kg, …
Raha namaly hoe « eny » tamin'ny fanontaniana 1 hatramin'ny 6 sy ny fanontaniana faha-9, mety misy « gènes de gros » ianao. Nefa, tsy tena atokisana izany. Mety hoe tsy manana ny gènes de gros ianao fa mihinan-kanina nefa tsy noana akory, ka mahatonga anao hatavy.
Mba hahafahanao mahalala ny marina, andramo aloha : raha mbola tsy mihetsika ny lanjanao (sady tsy mihena no tsy mitombo), tena manana ny « gènes de gros » tokoa ianao. Nefa, hainao ve ny mihinan-kanina amin'ny hanohanana ?